March 1, 2020 2268
खाडी मुलुक कतार सँगै अन्य खाडी मुलुकमा पनि कोरोना भा इरसको सं क्रमण देखिएको छ। कतारमा एकजना कोरोना भाइ रसबाट सं क्रमित भएको कतारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ज’नाएको छ।
बिहीबार इ’रानबाट उद्धा`र गरि ल्याईएका यात्रु मध्ये एक ३६ वर्षिया कतारी ना`गरिकमा कोरोना भा’इरसको सं क्रमण देखिएको कतारको स्वास्थ्य मन्त्रला`यले जनाएको छ। कतारमा ठूलो संख्यामा नेपा`लीहरु रहेका छन्। चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरो`नाको चपेतामा हाल खाडी मुलुकहरु पनि आएका छन्।
खाडीमा सबैभन्दा धेरै इरान प्रभा’वित भएको छ। जहाँ शनिबार २१० जनाको मृ’ त्यु भएको खबर छ। खाडी मुलुक तथा, दक्षिण कोरियामा कोरो’नाले म’हा मारी`को रुप लिन थालेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरुसमेत यती बेला त्रा`समा छन्। यद्यपी हालसम्म कुनै पनि नेपाली सं क्रमित नभ`एको बता`इएको छ।
कतारमा को`रोना सं`क्रमित फेला परेपछि दोहास्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सचेत रहन समेत अनुरोध गरेको छ। दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालीह`रुलाई सचेत रहन र सम्पर्कमा रहन भनेको हो ।
कसरी जो’गिने को’रोना भाइ`रसबाट?
कोरोना संक्र’मन बाट अस्पताल भर्ना भएका बिरा’मीहरु सन्चो हुँदै फर्किने क्रम जारी छ । को रोना भाइ’रस कमजोर खालको भाइ’रस प्रमाणित भएको छ । यसको मृ-त्यु दर १- २ % मात्र छ ।यसको औषधि तथा खोपको लागि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यो भाइ रस धेरै तातोमा स’क्रिय हुन नसक्ने भएकाले गर्मी सुरु भएपछि नियन्त्र`ण हुने चीनको विश्वास छ । कोरोना भाइ’रसको कार’ण सयौंको मृ`त्यु भयो, हजारौं संक्र`मित भए तर करोडौं व्यक्तिहरु चिन्ता’ग्रस्त छन्। कोरोना’ले भन्दा कोरो नाको कारण भइरहेको चि’न्ता, तना ब, अ सुरक्षा महसुस जस्ता मानसिक अ`सरले दीर्घरो’गी वृद्धि हुने तथा मृत `कको संख्या बढ्ने देखिएको छ
हामीकहाँ पाइने मास्कले कोरोनाको संक्रम’ण रोक्दैनन् । कोरोना भाइर:स टाउको, मास्कको बाहिरी भाग, कपडा, झोला, जुत्ता, हात आदि हुँदै घरघरमा फैलिन सक्छ । हाम्रा केहि बानीको कारण कोरोना संक्रम`णको जोखि`म उच्च छ ।
“मान्छेतिर फर्केर खोक्ने, हाच्छ्यु गर्ने, औंलालाई मुख , नाक , आँखा , कानतिर लैजाने, हात नधोइ खानेकुरा समाउने – खाने आदि ।” कोरोना संक्रʼमणबाट बच्ने एउटा उपाय छ, त्यो हो
– खल्तीमा, ब्यागमा ह्याण्ड स्यानिटाइजर वा अल्कोह:ल कन्टेन्ट स्यानिषटाइजर राख्ने, त्यसले पटक पटक हात सफा गर्ने । साबुन पानीले हात धोएर मात्र खाना खाने ।
को रोना सं क्रम:ण कसलाई छ जो`खिम ? पढ्नुहोस्
कोरोना भाइर’स फैलिएका देश फर्केकाहरु र त्यस्ता देशमा बस्ने व्यक्तिहरू ।
पर्यटक बस्ने होटेल, रेस्टुरेन्ट, क्यासिनो तथा उनीहरुले प्रयोग गरेका सवारी साधनसंग सम्बन्धित ।
पर्यटकीय क्षेत्रमा काम तथा ब्यबसाय गर्नेहरु ।
कुकुर, बिराला, कुखुरा, परेवा लगायतका पशुपंक्षी पाल्ने तथा संगै रहने व्यक्तिहरु ।
– मा:सु का ट्ने, पकाउने, काँचै खाने व्यक्तिहरु ।
– हात नधोइ खाना खाने व्यक्तिहरु ।
– प्रत्येक पटक हात नधोइ बारम्बार सु र्ती खाने व्यक्तिहरु ।
– बालबालिका, बुढाबुढी, गर्भवती, सुत्के री, दी र्घ बिरामी तथा रोग प्रति`रोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरु।
-सार्वजनिक यातायात, सपिंग मल, फ्लिम हल, विमानस्थल, अस्पताल, बिद्यालय / कलेज लगायत भीड हुने स्थानमा रहने व्यक्तिहरु ।
– भीडभा`डमा हिंड्दा सहि तरिकाले गुणस्तरीय मास्क ( एन ९५ ) प्रयोग नगर्नेहरु । र भेट हुँदा हात मिलाउने, हग गर्ने, चुम्ब न गर्ने बानी भएका व्यक्तिहरु , आदि । यो सबैले शेयर गर्नुहोला ताकि सबै जना सचेत हुन् ।।
Prevहेमालाई पि टेको भिडि’यो खिच्ने पत्रकार आए मीडियामा , भिडियो खिचेको देखेपछि यसो गर्यो प्र’हरीले ( हेर्नुहोस् भिडियो)
Nextहरेक वर्ष छोरी खोज्न नेद’रल्याण्डबाट नेपाल आ`उँछिन् यी ७८ वर्षि’य आमा
दुबै हातखुट्टा नभएर पनि सीपीले गर्छन् फोटोग्राफी, प्रेरणा दिने यो भिडियो